Tube Extruder Machine Fekitori - China Tube Extruder Machine Vagadziri, Vatengesi
Polymer Vertical Type Tube Ram Extruder Muchina PFG600 yePolymer PTFE Tube Dia 300mm-600mm
Hunhu hweT Tube Ram Extruder PFG600 Kuburikidza nekuenderera mberi kwekuvandudza, michina yacho yakapusa, yakatsiga uye inoshanda. Iyo midziyo inodzorwa ne PLC system, uye inoshandiswa otomatiki nekuita kuri nyore. Nekugadzirwa kwakasiyana siyana, iyo michina inogona kusangana nezvinodiwa zvakasiyana zvevashandisi, uye zvigadziriswe vatengi. Iyo midziyo inomhanya yakamira kwenguva yakareba, iine ruzha rwezasi. Uye inoderedza mutengo nekuchengetedza simba uye simba panguva yekumanikidza kugadzirisa. Zvishandiso uye kuumbwa kunoitwa ...
Corrugated Pipe Machine Zvimiro: 380V, 1.5KW, Frequency Control, Zvekugadzirwa kweyekunze dhayamita yeOD ye10mm kusvika 50mm, Wallthickness 1-2MM PTFE yakakanganiswa pombi. PTFE inogadziriswa hosi muchina inotora hita yekunze, iyo yekudziya tembiricha inogona kunge iri + -1 degree, munhu anogona kuvhiya michina miviri, Kana 16/18 PTFE yakagadziriswa hose hora inokwana 15-35 metres.
Hunhu hweT Tube Ram Extruder PFG300 Kuburikidza nekuenderera mberi kwekuvandudza, michina yacho yakapusa, yakatsiga uye inoshanda zvakanyanya. Iyo midziyo inodzorwa ne PLC system, uye inoshandiswa otomatiki nekuita kuri nyore. Nekugadzirwa kwakasiyana siyana, iyo michina inogona kusangana nezvinodiwa zvakasiyana zvevashandisi, uye zvigadziriswe vatengi. Iyo midziyo inomhanya yakamira kwenguva yakareba, iine ruzha rwezasi. Uye inoderedza mutengo nekuchengetedza simba uye simba panguva yekumanikidza kugadzirisa. Zvishandiso uye kuumbwa kunoitwa ...
Polymer PTFE Tube Ram Vertical Type Extruder Muchina PFG150 Dia 20mm-150mm
Hunhu hweT Tube Ram Extruder PFG150 Kuburikidza nekuenderera mberi nekuvandudza, michina yacho yakapusa, yakatsiga uye inoshanda zvakanyanya. Iyo midziyo inodzorwa ne PLC system, uye inoshandiswa otomatiki nekuita kuri nyore. Nekugadzirwa kwakasiyana siyana, iyo michina inogona kusangana nezvinodiwa zvakasiyana zvevashandisi, uye zvigadziriswe vatengi. Iyo midziyo inomhanya yakamira kwenguva yakareba, iine ruzha rwezasi. Uye inoderedza mutengo nekuchengetedza simba uye simba panguva yekumanikidza kugadzirisa. Zvishandiso uye kuumbwa kunoitwa ...
yakamira mhando Polymer PTFE Tube Ram Extruder Machine PFG500 Dia 300mm-500mm
Hunhu hweT Tube Ram Extruder PFG500 Kuburikidza nekuenderera mberi kwekuvandudza, iyo michina yakapusa, yakatsiga uye inoshanda zvakanyanya. Iyo midziyo inodzorwa ne PLC system, uye inoshandiswa otomatiki nekuita kuri nyore. Nekugadzirwa kwakasiyana siyana, iyo michina inogona kusangana nezvinodiwa zvakasiyana zvevashandisi, uye zvigadziriswe vatengi. Iyo midziyo inomhanya yakamira kwenguva yakareba, iine ruzha rwezasi. Uye inoderedza mutengo nekuchengetedza simba uye simba panguva yekumanikidza kugadzirisa. Zvishandiso uye kuumbwa kunoitwa ...